musha nyika dzakabatana Singers Dr Dre Zvekuita Nyaya Yevacheche Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya yeUS Celeb akambodaidzwa zita remadunhurirwa "Dr J“. Icho chizere chakafukidzwa chaDr Dre Wevacheche Nyaya, Hupenyu, Mhuri Chokwadi, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, uye zvimwe zvinozivikanwa zviitiko kubva panguva yaakange asiri chinhu kusvika paakatanga kufarirwa.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wemapiyona e gangster rap. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Dr Dre's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Dr Dre Nyaya dzeChidiki:
Kutanga kuenda, iye haana kuzvarwa aine zita Dr Dre. Andre Romelle Mudiki ndiwo mazita evabereki vaDre Dre vakamupa pakuberekwa kwake. Iyo American rapper, rekodhi mugadziri, muzvinabhizimusi, rekodhi maneja, mutambi, uye odhiyo injiniya akazvarwa pazuva re18th raKukadzi 1965 kuCompton City muCalifornia USA.
Dr Dre ndivo vega mwana akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake- amai vake, Verna Griffin nababa vake, Theodore Young.
Sangana nemumwe wevabereki vaDr Dre.
Kutenda kuberekwa munyika yevasununguka, Dr Dre inyika yeAmerican yedzinza rakasviba nemadzinza emhuri yeAfro-American akakurira muguta rake rekuzvarwa muCompton. Kukurira mumhuri yepakati mhuri yepamberi kuCompton, mudiki Dr Dre aive mimhanzi inofarira akaona nyika yemhirizhonga, zvinodhaka uye mhirizhonga izvo zvisina mwana akafanirwa kuona. Nekudaro, aigara achinyeverwa nevabereki vake kuti vagare vakachena uye vakatarisa pakuve vanobatsira munharaunda.
Rap prodigy akakurira mune ino chaiyo imba kuCompton.
Ateerera kuraira kwevabereki vake, Dr Dre vakaisa nguva yakawanda mukuda uye kunyora mimhanzi mushure mekugamuchira muimbi musanganiswa weKisimusi muna 1984. Akabata musanganiswa, Dr Makore ane makore masere akatendeudzira mhuri kumusha studio uye dzimwe nguva aizoenda kwemazuva mashoma asina kurara kuti agadzire mimhanzi inonzwika, achiziva zvese kuti hupenyu hwake hwaizotenderera nekutenderera kuratidza.
Akatanga kuita mimhanzi aine makore gumi nemasere uye akachinja imba yake yemhuri ku studio.
Dr Dre Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Vabereki vaDr Dre vakamunyoresa kuVanguard Junior High Chikoro muCompton paakanga akura zera 11. Vechidiki vechidiki mukugadzira vakazoendeswa kuRoosevelt Junior High Chikoro nekuda kwechisimba chematsotsi. Ndichiri kuzvikoro zvataurwa pamusoro apa, Dr Dre vakazvipira kudzidza zvisinei nezviitiko zvinokonzeresa zvechisimba izvo zvakaita kuti kudzidza kuve kusinganakidzi.
Nekudaro, mazuva ekupedzisira eDr Dre dzidzo, kutanga kuCentennial High School kwakamuona achitora mamakisi asina kunaka nekuti ainyanya kufunga nezvekunyora nziyo, kana iyewo mukomana achiri kuyaruka haana kuita chinzvimbo chakanaka paakaendeswa kuFremont High School uye Chester Adult Chikoro. Akazopedzisira aburukira panze kuti atarise pakuimba mimhanzi.
Akaneta nekuramba achiramba mamakisi uye akadonha kuti ave anotarisisa mukugadzira mimhanzi.
Dr Dre Pakutanga Yehupenyu Hupenyu:
Hongu, Dr Dre vakatanga basa ravo nekuimba mimhanzi, kwete semurapi asi disk jockey (Dj) mukirabhu yemuno inonzi - The Eve After Dark. Yakanga iri pakirabhu iyo yaakatora zita rebasa "Dr J" mukuremekedza kwake bhora rebhasikiti chidhori Julius Erving. Hazvina kutora nguva asati atora "Dr Dre" - inova musanganiswa wemamwe mazita Dr J uye zita rake rekutanga - sezita rake idzva remudanho.
VERENGA Justin Timberlake Hupenyu hweMwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Anotevera ekutanga basa rekuyedza akaona Dr Dre akatanga rake remimhanzi basa semurapi pamwe neboka remimhanzi, World Class Weckin 'Cru. Akashanda nesimba neboka kuburitsa iyo imwechete - 'Kuvhiya' iyo yakazova hit iyo yaitonga nzvimbo yemagetsi kumahombekombe ekumadokero uye vakatengesa anopfuura makopi zviuru makumi mashanu mukati meCompton chete!
Akatanga kuita ruzha semurapi neiyo World Class Weckin 'Cru.
Dr Dre Road KuMukurumbira Nyaya:
Makore maviri gare gare muna 1986, Dr Dre pamwe newaaishanda naye kuThe Eve After Dark kirabhu - Dj Yella, vakabatana nevamwe vaimbi vaviri Eazy-E uye Ice Cube kuumba gangsta rap group reNWA (Niggaz for Life) yeRuthless Record Label . Chinangwa chikuru cheboka chaive chekubatanidza madingindira ematsotsi emumadhorobha uye mararamiro ehunhu mumazwi akashata uye akajeka ekudyidzana zvakanyanya neAmerica nechidimbu chehupenyu 'chaihwo' mumigwagwa.
Kutarisisa kwakadaro kwakanyanya kuwanikwa muNWA's debutant studio album, 'Straight Outta Compton' iyo yainyora blockbuster kubudirira nekutengesa kwemamirioni maviri emakopi. Muchokwadi, iro rwiyo rakabudirira kwazvo rimwe chete rekuti 'Fu * k Tha Mapurisa' rakawanikwa richidenha neFederal Bureau yeInvestigation FBI iyo yakatumira boka iri tsamba yambiro. Kunyangwe hazvo NWA yakaramba ichiburitsa dambarefu rayo rechipiri, 'Efil2zaggin' (4) isati yaparara.
Akananga kunze kweCompton akarova asina kuroorwa - Fuck Tha Mapurisa akamuita iye neboka rake reNWA vakauya vachiongororwa neFBI.
Dr Dre Kukwira Kunzvimbo Yemukurumbira:
Zvichitevera kubviswa uku, Dr Dre vakaenderera mberi nekuwana Death Row Records nemusimudziri wekonzati - Marion “Suge” Knight muna 1991. Paive neDeath Row Records apo Dr Dre vakaburitsa yavo yekutanga iyo yakashandiswa senge musoro wenyaya we firimu Chakafukidza (1992).
Hazvina kutora nguva refu Dr Dre vasati vawana mukurumbira nekuburitswa kweavo mhandara album 'The Chronic' (1992) iyo yainyora yakaoma uye yekutengesa kubudirira. Iyo album yaive neyakaimba senge 'Nuthin' asi 'G' Thang ',' Let Me Ride 'uye' Fuck naDre Day, 'yakashandura indasitiri yemimhanzi uye ikaita iyo albhamu chiitiko chetsika. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Iyo Chisingaperi 'yaisangove yechimurenga asi yetsika chiitiko.
Dr Dre Zvehukama Hupenyu Chokwadi:
Achienderera mberi kuhupenyu hwerudo hwaDr Dre, anga ave nemugove wakanaka wevasikana, fiances nemadzimai. Tinokuunzira rondedzero yenhoroondo yekufambidzana uye mamiriro ehukama hwazvino. Kutanga nevanasikana vaDr Dre, akatanga kudanana naCassandra Joy Green. Yavo yaive nyaya yaive yehupenyu hwepfupi asi yakapa kuberekwa kwemwanakomana wekutanga waDr Dre Curtis Young. Curtis muparidzi anoshuvira akaroora Vanessa Young. Vane vana vaviri panguva yekunyora iyi bio.
VERENGA 50 Cent Childhood Indaba Nezve Untold Biography Facts
Curtis Mudiki nababa vake vane mukurumbira vakafanana.
Dr Dre vakaenderera mberi nekuita nyaya naLisa Johnson naJenita Porter avo vese vakamuberekera vana (mwanakomana nemwanasikana zvakateerana) kwaari. Ivo vanozivikanwa sevashoma kuzivikanwa - La Tanya Danielle Young uye kunonoka Andre Young Jr. Yakanga isiri kusvika 1987 apo Dr Dre vakagadzirisa hukama hwake hwekutanga hwakakomba naMichel'le Denise Toussaint uye vakatomupfimba. Hukama hwacho hwakamutsa kuzvarwa kwemwanakomana Marcel Young vasati vadanana vakapinda munzira dzakasiyana.
Late Andre Young Jr (kuruboshwe), Marcel Young naamai vake Michel'le (kurudyi).
Nezve hukama hwaDr Dre panguva yekunyora, anofara akaroora mukadzi wake Nicole Young. Nicole aive gweta asati ave mukadzi waDr Dre asi akasiya basa rake kuti ape murume wake zvakanakisa zvake. Kubatana kwavo kwakakomborerwa nevana vaviri Chokwadi (mwanakomana) uye Chokwadi (mwanasikana).
Dr Dre vakafananidzirwa nemukadzi wavo Nicole nemwanasikana Chokwadi.
Dr Dre Hwemhuri Hupenyu Hwechokwadi:
Kune vashoma vashoma rekodhi vagadziri vakakomborerwa nemhuri inotsigira uye Dr Dre ndomumwe wavo. Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri yaDr Dre kutanga nevabereki vake.
Nezve baba vaDr Dre: Theodore Young ndiye baba vemunyori wenhoroondo. Akaimba mune isina kuimbwa R & B boka rekuimba rakanzi 'The Romelles' panguva yehupenyu hwaDr Dre achiri mudiki ndokumutumidza zita 'Romelle' mushure meye amateur group. Unoziva here kuti Theodore akaroorwa chete naamai vaDr Dre pakati pa1964 na1972? Kutevera kurambana, Theodore haana kumbogara kure naDr Dre uyo anomupa mbiri yekuva munhu akanaka.
Nezve amai vaDr Dre: Verna Griffin ndiamai vaDr Dre. Aive muimbi neboka remimhanzi reAne Aces asati asiya kuitira kuti atarise kurera mwana Dr Dre waakabereka ari 16-gore. Kutevera kupatsanurwa kwake nababa vaDr Dre, Verna akaroorazve kaviri. Kutanga kuna Curtis Crayon uye gare gare Warren Griffin. Kunyangwe zvakadaro haana kana kutsauswa kubva mukuchengeta Dr Dre uyo anoramba ari padyo naye panguva yekunyora iyi biography.
Dr Dre naamai vake vane rudo Verna.
Nezve hama dzaDr Dre: Dr Dre havana hama dzekubereka asi nhanho-hama uye nhanho-hanzvadzi akazvarwa kuna amai vake kubva kune vakaroora zvakare. Ivo vanosanganisira Shameka Crayon, nhanho-hanzvadzi kubva kumuchato waVerna naCurtis Crayon. Mumwe wehama dzekurera Dr Dre akaonekwa saWarren G (kubva kumuchato waVerna Young naWarren Griffin).
Dr Dre nemumwe wehama dzake Warren G.
Wakawedzerwa kune zvakanyorwa ndiJerome Crayon naTyree Crayon (vese vakazvarwa nemuchato waVera naCurtis Crayon). Dr Dre vakakurira pamwe neambotaurwa-nhanho-vanun'una uye havana kana kumbonyara kuziva kwavari.
Nezve hama dzaDr Dre: Achienderera kuDr Dre akawedzera hupenyu hwemhuri uye madzitateguru, hapana zvinyorwa zvemhuri yake kunyanya iwo amadzisekuru nasekuru naambuya nasekuru nasekuru. Anogadzira zvinyorwa ane hama inozivikanwa saiye anogadzira Sir Jinx nepo asingazivikanwe vanababamunini vake, babamunini, madzikoma, hama nevanun'una.
VERENGA Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Dr Dre Maitiro Ehupenyu Hwechokwadi:
Chinzvimbo chaDr Dre semugadziri ane mukurumbira rekodhi chinowedzeredzwa - uye chakatoitwa nani - nehunhu hukuru hunotsanangurwa nehunhu hwechiratidzo cheAquarius Zodiac. Iye anotonhorera, akasarudzika, anoratidzira hunhu hweanokanganisa uye haawanzo kuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwepachivande nehukama.
Kana Dr Dre asiri kushanda muma studio kana kuita mafirimu, anowana zviitiko zvishoma akave akawedzera nguva yekufarira sekuita kwake kufarira uye kuita zvemitambo. Zvinosanganisira kutamba basketball, kushanda kunze uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Kutamba baseball ndechimwe chezvavanofarira.
Dr Dre Maitiro ehupenyu:
Taura mabasa aDr Dre ekuita mari uye maitiro ekushandisa, ane mari inofungidzirwa yemadhora mazana masere emadhora panguva yekunyora. Kupa sosi kune yake inokwira yemari base kunobva kune wake mukuru muridzi weAfmath Rekodhi Label uye Beats Electronics. Iye zvakare anoita mamirioni emadhora kubva kune endorsement madhiri.
Saka nekudaro, Dr Dre vanokwanisa kurarama hupenyu hwemutambarakede kusanganisira kuve nemamiriyoni mazana mana emam mega-imba muBrentwood, Los Angeles Imba yakasarudzika inotenderera maeka 40, ine dzimba mbiri dzekuvata, yekugezera 4, imba yekutandarira, gidhi uye puru yekushambira. Rakarongedzwa mumba mota dzakasarudzika dzinoshandiswa naDr Dre kufamba mumigwagwa yeLos Angeles. Ivo vanosanganisira dema Roll-Royce Phantom Coupe, chena anotenderera Royce vaviri pakati pevamwe.
Pfupiso ye Dr Dre mararamiro.
Dr Dre Chokwadi:
Yedu yekurara Dr nyaya uye biography yakanakira kuputira neinotevera isinganyatso kuzivikanwa kana Untold chokwadi nezvake.
Dr Dre vanonwa nekuputa. Semurapi, Dr Dre akaisirwa mari yakawanda mukusvuta panguva yaakatoburitsa dambarefu 'The Chronic' (1992) iro rakanangidzirwa reMarijuana ine simba.
Ehe, iye anosvuta asi anoteerera zvakanyanya kuhutano hwake.
Unoziva here kuti Dr Dre vakabatsira kutarisisa mabasa evazhinji ma rappers kusanganisira 2Pac, Snoop Dogg, Eminem, Xzibit, Knoc-turn'al, 50 muzana, Kendrick Lamar pakati pevamwe. Ndosaka zvisingashamisi kuti anoremekedzwa zvakanyanya nevamwe vapamusoro muindasitiri vakadaro Kanye West uye Jay-Z.
se Drake, Dr Dre ane chinhu chema tattoos sezvo aine zvinhu zvakati wandei zvemuviri wemitambo zvatinoziva nezvazvo. Dzinosanganisira dandemutande rewebhu rine marimi kuruoko rwake rweruboshwe pamwe nehundi nemarara paruoko rwake rworudyi. Dr Dre zvakare ane yakajeka tattoo dhizaini kuruboshwe ruoko.
Kana zvasvika kumatattoos, zvishoma ndezvakawanda kune mugadziri wezvinyorwa.
Vabereki vaDr Dre vakamupa mazita echiKristu pakuzvarwa kwake, chiitiko chinoreva kuti akazvarwa mumhuri yechiKristu. Nekudaro, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvechinamato chake nekuti haana kukura pazvinhu zvine chekuita nemashiripiti.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Dr. Dre Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!